by CHANNEL+ January 27, 2020
Koreaရဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲသရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ Lee Byung Hun, Ha Jung Woo, Ma Dong Seok, Bae Su Zyတို့ကို အတူတကွမြင်ရမယ့် Ashfall.
Koreaမှာ တစ်ခါမှ မကြုံဖူးသေးတဲ့ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး Baekduမီးတောင် ပေါက်ကွဲမှုဟာ Koreaကျွန်းဆွယ် တစ်ခုလုံးပျက်စီးနိုင်တဲ့ အန္တရာယ် တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။
Baekduမီးတောင်အောက်က ချော်ရည်တွေ ရှိနေတဲ့ အလွှာလေးခုဟာ တစ်ခုချင်းထပေါက်ကွဲထွက်လာပြီး ဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ ငလျှင်တွေ အကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်စေပါတော့တယ်။
နောက်ဆုံး အလွှာပေါက်ကွဲခဲ့ရင်တော့ Koreaကျွန်းဆွယ်တစ်ဝက်နီးပါ ပျက်စီးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Professor Kang Bong-Rae(Ma Dong-Seok)ဟာ Baekduတောင်ကနေ မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်ကတည်းက လေ့လာခဲ့ပြီး အစိုးရကိုတင်ပြခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူမှ နားမထောင်ခဲ့ဘူး။
အခုတော့ Baekduတောင်ကနေ ပေါက်ကွဲမှုဟာ Koreaကျွန်းဆွယ်အတွက် အန္တရယ်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပြီ။ Baekduတောင် မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုရဲ့ နောက်ထပ် အကျိုးဆက်တွေကို အချိန်မီတားဆီးဖို့ Professor Kang Bong-Raeရဲ့ သီအိုရီအတိုင်း Captain Jo In-Chang (Ha Jung-Woo)နဲ့ သူ့ရဲ့ EODအဖွဲ့ဟာ စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုအဖြစ် ပေါက်ကွဲနိုင်တဲ့ လက်နက်တွေကို မြောက်ကိုရီးယားစခန်းတစ်ခုကနေ Lee Joon Pyeong (Lee Byung Hun)ရဲ့ အကူအညီနဲ့ အချိန်မီ ဖယ်ထုတ်ပြီး တောင်အောက်ခြေဘက်မှာ ဖောက်ခွဲပြစ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Lee Byung Hun ဟာ အခုအချိန်မှာ ထောင်ကျနေတဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ပြည်သူ့စစ်တပ် ဝန်ကြီးဌာနက Lee Joon-Pyeong အဖြစ် မြင်ရမှာ ပါ။ Captain Jo In-Chang အဖြစ် (Ha Jung-Woo)က သရုပ်ဆောင်ထားပြီး Captain Joရဲ့ ဗိုက်ကြီးသည် ဇနီးChoi Ji-youngအဖြစ် Bae Su Zyက သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
Koreaရဲ့ ဒိတျဒိတျကွဲသရုပျဆောငျတှဖွေဈတဲ့ Lee Byung Hun, Ha Jung Woo, Ma Dong Seok, Bae Su Zyတို့ကို အတူတကှမွငျရမယ့ျ Ashfall.
Koreaမှာ တဈခါမှ မကွုံဖူးသေးတဲ့ ကွောကျစရာအကောငျးဆုံး Baekduမီးတောငျ ပေါကျကှဲမှုဟာ Koreaကြှနျးဆှယျ တဈခုလုံးပကြျစီးနိုငျတဲ့ အန်တရာယျ တဈခုဖွဈလာပါတယျ။
Baekduမီးတောငျအောကျက ခြောျရညျတှေ ရှိနတေဲ့ အလှှာလေးခုဟာ တဈခုခငြျးထပေါကျကှဲထှကျလာပွီး ဆိုးရှားပွငျးထနျတဲ့ ငလြှငျတှေ အကွီးအကယြျဖွဈပေါျစပေါတော့တယျ။
နောကျဆုံး အလှှာပေါကျကှဲခဲ့ရငျတော့ Koreaကြှနျးဆှယျတဈဝကျနီးပါ ပကြျစီးမှာ ဖွဈပါတယျ။ Professor Kang Bong-Rae(Ma Dong-Seok)ဟာ Baekduတောငျကနေ မီးတောငျပေါကျကှဲမှုတှေ ဖွဈလာနိုငျတယျဆိုတာကို လှနျခဲ့တဲ့ ၃နှဈကတညျးက လေ့လာခဲ့ပွီး အစိုးရကိုတငျပွခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ ဘယျသူမှ နားမထောငျခဲ့ဘူး။
အခုတော့ Baekduတောငျကနေ ပေါကျကှဲမှုဟာ Koreaကြှနျးဆှယျအတှကျ အန်တရယျကွီးတဈခု ဖွဈလာခဲ့ပွီ။ Baekduတောငျ မီးတောငျပေါကျကှဲမှုရဲ့ နောကျထပျ အကြိုးဆကျတှကေို အခြိနျမီတားဆီးဖို့ Professor Kang Bong-Raeရဲ့ သီအိုရီအတိုငျး Captain Jo In-Chang (Ha Jung-Woo)နဲ့ သူ့ရဲ့ EODအဖှဲ့ဟာ စဈဆငျရေးတဈခုအဖွဈ ပေါကျကှဲနိုငျတဲ့ လကျနကျတှကေို မွောကျကိုရီးယားစခနျးတဈခုကနေ Lee Joon Pyeong (Lee Byung Hun)ရဲ့ အကူအညီနဲ့ အခြိနျမီ ဖယျထုတျပွီး တောငျအောကျခွဘေကျမှာ ဖောကျခှဲပွဈရမှာ ဖွဈပါတယျ။
Lee Byung Hun ဟာ အခုအခြိနျမှာ ထောငျကနြတေဲ့ မွောကျကိုရီးယား ပွညျသူ့စဈတပျ ဝနျကွီးဌာနက Lee Joon-Pyeong အဖွဈ မွငျရမှာ ပါ။ Captain Jo In-Chang အဖွဈ (Ha Jung-Woo)က သရုပျဆောငျထားပွီး Captain Joရဲ့ ဗိုကျကွီးသညျ ဇနီးChoi Ji-youngအဖွဈ Bae Su Zyက သရုပျဆောငျထားပါတယျ။
#MingalarCinemas မှကူယူထားပွီ ဘာသာပွနျထားသူကတော့ သားညိုလှငျပ
Translated and Review By Thar Nyo Lwin
Imdb-6.8 by 10
File size - 925MB
Link - https://gplinks.in/k6pgQl3
File size - 225MB
Link - https://gplinks.in/aigWLpc
Link - https://mkvlinks.xyz/OBeTCCT5
Link - https://mkvlinks.xyz/AKyJ
Koreaရဲ႕ ဒိတ္ဒိတ္ႀကဲသ႐ုပ္ေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့ Lee Byung Hun, Ha Jung Woo, Ma Dong Seok, Bae Su Zyတို႔ကို အတူတကြျမင္ရမယ့္ Ashfall.
Koreaမွာ တစ္ခါမွ မႀကဳံဖူးေသးတဲ့ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆုံး Baekduမီးေတာင္ ေပါက္ကြဲမႈဟာ Koreaကြၽန္းဆြယ္ တစ္ခုလုံးပ်က္စီးနိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္ တစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။
Baekduမီးေတာင္ေအာက္က ေခ်ာ္ရည္ေတြ ရွိေနတဲ့ အလႊာေလးခုဟာ တစ္ခုခ်င္းထေပါက္ကြဲထြက္လာၿပီး ဆိုး႐ြားျပင္းထန္တဲ့ ငလွ်င္ေတြ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေပၚေစပါေတာ့တယ္။
ေနာက္ဆုံး အလႊာေပါက္ကြဲခဲ့ရင္ေတာ့ Koreaကြၽန္းဆြယ္တစ္ဝက္နီးပါ ပ်က္စီးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Professor Kang Bong-Rae(Ma Dong-Seok)ဟာ Baekduေတာင္ကေန မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈေတြ ျဖစ္လာနိုင္တယ္ဆိုတာကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ႏွစ္ကတည္းက ေလ့လာခဲ့ၿပီး အစိုးရကိုတင္ျပခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္သူမွ နားမေထာင္ခဲ့ဘူး။
အခုေတာ့ Baekduေတာင္ကေန ေပါက္ကြဲမႈဟာ Koreaကြၽန္းဆြယ္အတြက္ အႏၱရယ္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ၿပီ။ Baekduေတာင္ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈရဲ႕ ေနာက္ထပ္ အက်ိဳးဆက္ေတြကို အခ်ိန္မီတားဆီးဖို႔ Professor Kang Bong-Raeရဲ႕ သီအိုရီအတိုင္း Captain Jo In-Chang (Ha Jung-Woo)နဲ႕ သူ႕ရဲ႕ EODအဖြဲ႕ဟာ စစ္ဆင္ေရးတစ္ခုအျဖစ္ ေပါက္ကြဲနိုင္တဲ့ လက္နက္ေတြကို ေျမာက္ကိုရီးယားစခန္းတစ္ခုကေန Lee Joon Pyeong (Lee Byung Hun)ရဲ႕ အကူအညီနဲ႕ အခ်ိန္မီ ဖယ္ထုတ္ၿပီး ေတာင္ေအာက္ေျခဘက္မွာ ေဖာက္ခြဲျပစ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Lee Byung Hun ဟာ အခုအခ်ိန္မွာ ေထာင္က်ေနတဲ့ ေျမာက္ကိုရီးယား ျပည္သူ႕စစ္တပ္ ဝန္ႀကီးဌာနက Lee Joon-Pyeong အျဖစ္ ျမင္ရမွာ ပါ။ Captain Jo In-Chang အျဖစ္ (Ha Jung-Woo)က သ႐ုပ္ေဆာင္ထားၿပီး Captain Joရဲ႕ ဗိုက္ႀကီးသည္ ဇနီးChoi Ji-youngအျဖစ္ Bae Su Zyက သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္။
Koreaရဲ႕ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲသ႐ုပ်ေဆာင်တွေဖြဈတဲ့ Lee Byung Hun, Ha Jung Woo, Ma Dong Seok, Bae Su Zyတို႔ကို အတူတကွမြင်ရမယ့် Ashfall.
Koreaမွာ တဈခါမွ မကြုံဖူးေသးတဲ့ ေကြာက်စရာအေကာင်းဆုံး Baekduမီးေတာင် ေပါက်ကွဲမႈဟာ Koreaၾကႇန်းဆွယ် တဈခုလုံးပၾက်စီးနိုင်တဲ့ အန္တရာယ် တဈခုဖြဈလာပါတယ်။
Baekduမီးေတာင်ေအာက်က ေျခာ်ရည်ေတွ ရွိနေတဲ့ အလွွာေလးခုဟာ တဈခုချင်းထေပါက်ကွဲထွက်လာပြီး ဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ ငၾလႇင်ေတွ အကြီးအကၾယ်ဖြဈေပါ်စေပါေတာ့တယ်။
ေနာက်ဆဳံး အလွွာေပါက်ကွဲခဲ့ရင်ေတာ့ Koreaၾကႇန်းဆွယ်တဈဝက်နီးပါ ပၾက်စီးမွာ ဖြဈပါတယ်။ Professor Kang Bong-Rae(Ma Dong-Seok)ဟာ Baekduေတာင်ကေန မီးေတာင်ေပါက်ကွဲမႈေတွ ဖြဈလာနိုင်တယ်ဆိဳတာကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ႏွဈကတည်းက ေလ့လာခဲ့ပြီး အစိုးရကိုတင်ပြခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သဴမွ နားမေထာင်ခဲ့ဘူး။
အခုေတာ့ Baekduေတာင်ကေန ေပါက်ကွဲမႈဟာ Koreaၾကႇန်းဆွယ်အတွက် အန္တရယ်ကြီးတဈခု ဖြဈလာခဲ့ပြီ။ Baekduေတာင် မီးေတာင်ေပါက်ကွဲမႈရဲ႕ ေနာက်ထပ် အႀကိဳးဆက်တွေကို အၿခိန်မီတားဆီးဖို႔ Professor Kang Bong-Raeရဲ႕ သီအိုရီအတိုင်း Captain Jo In-Chang (Ha Jung-Woo)နဲ႕ သူ႕ရဲ႕ EODအဖွဲ႕ဟာ စဈဆင်ေရးတဈခုအဖြဈ ေပါက်ကွဲနိုင်တဲ့ လက်နက်တွေကို ေမြာက်ကိဳရီးယားစခန်းတဈခုကေန Lee Joon Pyeong (Lee Byung Hun)ရဲ႕ အကူအညီနဲ႕ အၿခိန်မီ ဖယ်ထဳတ်ပြီး ေတာင်ေအာက်ခြေဘက်မွာ ေဖာက်ခွဲပြဈရမွာ ဖြဈပါတယ်။
Lee Byung Hun ဟာ အခုအၿခိန်မွာ ေထာင်ကျနေတဲ့ ေမြာက်ကိဳရီးယား ပြည်သဴ႕စဈတပ် ဝန်ကြီးဌာနက Lee Joon-Pyeong အဖြဈ မြင်ရမွာ ပါ။ Captain Jo In-Chang အဖြဈ (Ha Jung-Woo)က သ႐ုပ်ေဆာင်ထားပြီး Captain Joရဲ႕ ဗိုက်ကြီးသည် ဇနီးChoi Ji-youngအဖြဈ Bae Su Zyက သ႐ုပ်ေဆာင်ထားပါတယ်။
#MingalarCinemas မွကူယူထားပြီ ဘာသာပြန်ထားသူကေတာ့ သားညိုလွင်ပ